Jami: အခမဲ့နှင့်လူတိုင်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ် Linux မှ
Jami သည် Ring ဟုခေါ်သော application အဟောင်း၏အမည်သစ်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အနက်မှယခင်အခွင့်အလမ်း ၂ ခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၆ ဆောင်းပါးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်«Ringtone - GNU / Linux ရှိ Skype အတွက်အစားထိုးတစ်ခု»ထို့နောက် 2018 ကနေအခြား၌တည်၏«GNU / Linux 2018/2019 အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနှင့်အရေးကြီးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များ"။
ဒီနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ Ring app စီမံကိန်းသည် Jami ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ပိုမို လွတ်လပ်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်အတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အသုံးပြုသူများနှင့်သုံးစွဲသူများ၏အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ကဏ္sectorsများအတွက်ပိုမိုပွင့်လင်းမှုရှိသည်။
၎င်း၏လက်ရှိ developer များက Jami ကိုဖော်ပြသည်။
"Jami သည်အခမဲ့နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများ၏ privacy နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ "
ထိုမင်း၌ရှိ၏ အသစ်ကတရားဝင်ဝက်ဘ်ပေါ်တယ် သူတို့အခုရှင်းလိုက်ပြီလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတယ်
အများပြည်သူအတွက်သာမကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး Jami သည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အခမဲ့၊ လုံခြုံသောဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုအားပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးအာဏာပိုင်များနှင့်ဗဟိုဆာဗာများလည်ပတ်ရန်မလိုအပ်သည့်ဖြန့်ဝေထားသောဗိသုကာတွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ "
Jami ကို messaging application တစ်ခုအဖြစ်တန်ဖိုးထားနိုင်သည်၎င်းသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အသံနှင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၊ ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တကယ်လုပ်ဖို့ ကွဲပြားခြားနားသော Jami သည်၎င်းကိုထောက်ပံ့သောအခြေခံနည်းပညာဖြစ်သည်။
1.3.1 Ubuntu ကို
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသော application အတွက် privacy သည်အရေးကြီးသောကြောင့် Jami သည်ဤအချက်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ သတင်းများပေးပို့ခြင်း၊ အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဖိုင်ဝေမျှခြင်းများမှတဆင့် Jami သည်သင့်အားလွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်ခွင့်နှင့်သင်၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
၄၈ kHz Opus အသံအရည်အသွေးရှိသောအကန့်အသတ်မဲ့ပါ ၀ င်သူများဖြင့်ကွန်ဖရင့်ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။
၎င်းသည် high definition (HD) resolution ဖြင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများတွင်အရည်အသွေးမြင့်အတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
၎င်းတွင်ဖြန့်ဝေထားသောကွန်ယက်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပလက်ဖောင်းတွင်ဗဟိုဆာဗာမရှိဘဲလုံခြုံပြီးစာဝှက်ထားသောစာသားစာတိုပေးပို့ခြင်းပါဝင်သည်။ emojis နှင့် GIF ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို သုံး၍ ဖော်ပြချက်များနှင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုမျှဝေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
၎င်းသည်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ (ကလစ်များ) ကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိသောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိသောရှည်လျားသောစာတိုများသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုလွယ်ကူစေရန်။
multimedia ဖိုင်များ (ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ) ကိုအသုံးပြုသူများအကြားအရွယ်အစားအကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်သည်။ .gif, .jpg, jpeg, .png, .webp, .ogg, .mp3, .wav, .flac, .webm, .mp4 နှင့် .mkv ဖိုင်များကိုအလိုအလျောက် download လုပ်သည်။
ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးမှုသည် GNU / Linux ကိုအဓိကထားသည်ဤပလက်ဖောင်း (သို့) Operating System အပြင်၎င်းကိုအောက်ပါ Operating Systems အောက်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်မူလတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Android (Mobile / TV)
GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်၎င်းတွင်အရင်းအမြစ်ဖိုင်များနှင့် executable များရှိသည်။
၁၈.၁၀ (၆၄ bit)
လည်း အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြန့်ဝေမှုများတွင်လက်စွဲတပ်ဆင်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်သိုလှောင်ရုံများနှင့် Fedora 28 နှင့် 29 တို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းအပြင်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ချက်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုအတွက်၎င်း၏ဝီကီကို GitLab ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက်လည်ပတ်ရန်အသုံးဝင်သည်။ Git အပေါ် Jami.
Jami developer များကကမ်းလှမ်းသည် ၎င်း၏လျှောက်လွှာ, ပလက်ဖောင်းနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအတူတူဖြစ်ကြောင်း အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိ Internet messaging application များအတွက်လိုအပ်သောပုံမှန်လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီခြင်းဖြစ်သည်။
စာသား၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်ဖိုင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသောဖိုင်များပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်၊ ဖြန့်ကျက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ အစွမ်းထက်၊ လွတ်လပ်ပြီးကြော်ငြာကင်းမဲ့သောပတ်ဝန်းကျင်အောက်တွင်သုံးစွဲသူများအား၎င်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါလိုအပ်သောလွတ်လပ်မှုခံစားခွင့်ကိုပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Jami - အခမဲ့နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပလက်ဖောင်းအသစ်
Karmen မင်္ဂလာပါ! သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်။ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါသည်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်